Adamsberg adzoka. Kana musungwa achibuda, iyo nyowani kubva kuna Fred Vargas | Zvazvino Zvinyorwa
Adamsberg adzoka. Kana kuregedza kwabuda, iyo nyowani kubva kuna Fred Vargas
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Novela, Nhema nhema
Hongu, vazhinji vanoyemura mutungamiriri weFrance Jean Baptiste Adamsberg mune mhanza. Nhasi 14 yeFebruary iyo nyowani nyowani kubva pane yake akateedzana, Kana mafambiro aenda. Mambokadzi webvudzi reFrance, Fred vargas, anonunura mupurisa wake wepachivande uye anobudirira mune imwe kesi iyo inonyatso kufadza vateveri vake vakavimbika. Ngatitorei nyaya dzadzo dzekare.
2 Jean-Baptiste Adamsberg Akateedzana
3 Adamsberg paterevhizheni
Fred Vargas ndiro zita rekunyepedzera ra Frederique Audoin-Rouzeau, akaberekerwa muParis muna 1957. Iye nyanzvi yezvokuchera matongo nekudzidziswa, asi hapana mubvunzo anozivikanwa pasi rese semunyori wenhau dzematsotsi. Parizvino anyora gumi nemaviri aine muchengeti Adamsberg nechikwata chake seva protagonists. Akanyorawo akateedzera akateedzana vanofarira inozivikanwa se Vaevhangeri vatatu, kwaanoratidza ruzivo rwake sehunyanzvi hweMiddle Ages zvaari.
Yakahwina mibairo yakakosha pamhando iyi, kusanganisira ine mukurumbira International Dagger, iyo yakatakurwa katatu mumutsara. Asi ivo zvakare vanga vari iyo Prix ​​mystère de la critique, Mubairo Mukuru wemabhuku enhau dzematsotsi paCognac Festival kana iyo Giallo grinzane (2006). Nhoroondo dzake dzakashandurwa mukati Mitauro yakawanda nekubudirira kukuru kwekutengesa nekutengesa.
mudungwe Jean Baptiste Adamsberg
Paris uye Commissioner Adamsberg na yake yakakosha intuition uye nzira yekuferefeta vakandikunda mukati Tiza nekukurumidza, enda kure. Ndichine mashoma emabhuku ake akamirira ayo ini ndinotarisira kutanga nekukurumidza. Iwo akateedzana akaumbwa ne:
Murume ane madenderedzwa ebhuruu (1991)
Mutsara unovhiringidza uyo unoperekedza madenderedzwa ebhuruu ayo anoratidzika akateedzerwa muchoko mumigwagwa yeguta ichave iri nyaya yekuferefetwa kwekutanga kwaAdamsberg.
Murume akasimudza musoro (1999)
Mumusha uri muAlps, makwai anourawa uye vagari vacho vanotya. Mhumhi dzinoita senge ndidzo mhosva, asi kana ari mukadzi anoita kunge akafa, pane nyaya kuna Commissioner Adamsberg. Nekuti kune avo vanodavira kuti zvese ibasa remhumhi chaiyo inogara yakavanda mumakomo.
Nzizi ina (2000)
Kutanga kubatana pamwe nekatuni Edmond Baudoin kuunza mutungamiriri kune komiki.
Tiza nekukurumidza enda (2001)
Adamsberg anoongorora kuoneka kwezvinyorwa zvisinganzwisisike pamusuwo wechivako cheParis: ina inverted ina uye pasi petsamba nhatu, CLT. Joss, mutyairi wengarava wekare, anotambira tsamba dzinomuudza kuti kunotevera kuchave kupi. Uye kuvhunduka uye humhondi hunopinda muParis kana iri denda rinoratidzika kunge rapararira.
Seine inoyerera (2002)
Inosanganisira zvinyorwa zvitatu: Hutano nekusununguka, Husiku hwemabhuruti y Mafranc mashanu echikamu.
Pasi pemhepo yeNeptune (2004)
Adamsberg anoenda kuQuebec kunodzidza hunyanzvi hwekutsvagisa huri kugadzirwa nevamwe vake ikoko. Paanosvika, achasangana nemukadzi mudiki akapondwa aine matatu maronda ekubaiwa uye asinganzwisisike Trident, chipoko chemhondi chinoshungurudza Commissioner.
Mhandara yechitatu (2006)
Chipoko chemusista wezana remakore regumi nemasere uyo akauraya avo vakaurayiwa, akasvibisa zvitunha zvemhandara, mishonga yemashiripiti inovimbisa hupenyu husingaperi ... Commissioner Adamsberg achawana zvese izvi mune iri zita, izvo nguva ino zvingamubhadhare kwete chikonzero asi moyo.
Nzvimbo isina chokwadi (2008)
Shangu gumi nenomwe dzehangu dzetsoka dzakatemwa dzinoonekwa rimwe zuva pasina tsananguro kumakuva ekare eLondon. Adamsberg, aripo, akokwa neScotland Yard, kuti apinde musangano. Asi zuva rinotevera nhumwa dzeFrance dzinodzokera kunyika yavo. Ikoko vanowana mhosva inotyisa mune chalet kunze kweParis. Mutori wenhau akarega basa anoshanda mumatare edzimhosva akakwenenzverwa. Komisheni, achibatsirwa naDanglard wake asingaparadzanisike, acharondedzera nyaya mbiri idzi.
Mutengesi scourer (2010) Comic.
Kubatana kwechipiri naEdmond Baudoin kudzokorora kuponda kwakaonekwa nemurume asina pekugara uye zvakare mutengesi wescourer, anozobvunzurudzwa naAdamsberg.
Uto rakatsamwa (2011).
Panguva ino Adamsberg anotarisana nenhoroondo inotyisa yaNorman yepakati, iyo yeFurious Army: boka revarwi vasina kufa vanofamba-famba musango vachitora ruramisiro mumaoko avo. Mumwe mukadzi mudiki anobva kuNormandy anomirira Adamsberg munzira. Ivo havana kutaurwa, asi iye haadi kutaura kune chero munhu kunze kwake nekuti humwe husiku mwanasikana wake akaona iro Hondo Yehasha. Adamsberg inobvuma kuenda kunoongorora iro guta rinotyisa.
Nguva yechando (2015).
Iyo inoshamisa Robespierre fan kirabhu, yekare mhuri mafiira, matsvuku herrings, uye ekare maNorse ngano ndizvo zvigadzirwa zveiyi Adamsberg kesi.
Kana mafambiro aenda (2017).
Adamsberg, uyo adzoka kubva kuzororo kuIceland, anofarira kufa kwevakura vatatu nekuda kwekurumwa kwespider kunonyatso kuzivikanwa sekuzorora. Iyo inonetsa uye ine chepfu, asi haina kuuraya. Adamsberg anotanga kuferefeta kuseri kwechikwata chake muchirongwa chakaomarara chakadzokera kuMiddle Ages.
Adamsberg akaita kumeso kwemutambi weFrance Jean-Hughes Anglade mune nhepfenyuro yeterevhizheni yakashandura nyaya dze Murume ane denderedzwa rebhuruu, Murume akatarisa pasi, Pasi pemhepo yeNeptune y Nzvimbo isina chokwadi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Adamsberg adzoka. Kana kuregedza kwabuda, iyo nyowani kubva kuna Fred Vargas
Zvimwe zvinoda kuziva zvekunyora zvinyorwa
Novel Matikitivha: Chero Kufanana neChokwadi?